बिदेसिएका युवाको प्रश्न, तपाईंले जितेपछि हामी खाडी जानुपर्दैन ? « Light Nepal
बिदेसिएका युवाको प्रश्न, तपाईंले जितेपछि हामी खाडी जानुपर्दैन ?
काठमाडौं, २८ कार्तिक । निर्वाचन क्षेत्र मंगलपुरका दिनेश चौधरी आइतबार झोला बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिए । उनी कतार एयरवेजको बिहान ११ः४० बजेको उडानबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि दोहातर्फ हानिएका हुन् ।